8 kamid ah saraakiisha Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Sh.Hoose. | XAL DOON
Home NEWS 8 kamid ah saraakiisha Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Sh.Hoose.
8 kamid ah saraakiisha Shabaab oo lagu dilay weerar ka dhacay Sh.Hoose.
Diyaaradaha aan duuliyaha leheyn ee Mareykanka ayaa duqeyn la beegsaday fariisimo dagaal yahanada Shabaab ay ku leeyihiin deegaano kamid ah gobolka Sh.Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarka dhinaca cirka ahaa oo ka dhacay deegaanka Mubaarak lagu dilay sideed kamid ah Saraakiisha Shabaab, walow aan la soo bandhigin xilalka ay kooxdan ka hayeen.
“Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa Duqeyn xalay ay ka sameeyeen degaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellada hoose ku dilay 8 horjooge ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-shabaab” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda oo lagu daabacay bogga TVga Qaranka.
Dowladda Soomaaliya ma aysan ka hadal inuu jiro wax khasaare ah oo weerarkan ka soo gaaray dadka Shacabka ah ee ku sugnaa degaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellada hoose, iyadoo weerarada dhinaca cirka ah badanaa Shacabka khasaare lagu gaarsiiyo.
Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee AFRICOM wali meysan sheegan mas’uuliyada weerarkan, iyagoo ku howlan qiimeynta xadiga khasaaraha iyo inuu jiro waxyeelo rayid soo gaartay.